Fetin’ny mpifankatia : hisantaran’ny Mahaleo ny faha-45 taona | NewsMada
Fetin’ny mpifankatia : hisantaran’ny Mahaleo ny faha-45 taona
Efa nisy ny fandaharana manokana. Ho avy kosa ny fiakarana an-tsehatra, hanamarihan’ny tarika Mahaleo izany 45 taona izany…
“Fetinay, fetinareo, fetin’ny mpifankatia, fetintsika e!”. Io ny teny fanolorana nataon’ny tarika Mahaleo ao amin’ny pejy “Facebook”, mikasika indrindra ny fotoana homen’izy ireo ny mpankafy manaraka. Fantatra mantsy fa hosantarina an-tsehatra ny alahady 19 febroary ho avy izao, manomboka amin’ny 3 ora tolakandro, etsy amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina, ny fankalazana ny faha-45 taon’ny tarika.
Efa nampanantena ny tarika Mahaleo nandritra ilay fandaharana manokana, nentina nanokafana ny fankalazana, fa ho feno ny fandaharam-potoana amin’ity. “Raha mbola afaka koa izahay, mitohy hatrany ny fiarahana aminareo”, hoy indrindra mantsy i Dama tamin’izany. Fanombohana ihany, araka izany, ny etsy amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina io.
Toa ny mahazatra, ora maromaro no hiaraha-mizara ireo hira nanamarika izay 45 taona nolalovan’ny tarika izay. Tsy voafintina anatin’ny seho tokana mihitsy anefa izany, satria tsy tantaran’ny tarika sy ny mpikambana ao aminy fotsiny, fa tantaran’i Madagasikara mihitsy no norafetin’ny Mahaleo an-kira.
Tsy maintsy hisy ny fitetezam-paritra, ankoatra ny seho ankalamanjana ho an’ny besinimaro, izay nampiavaka ny Mahaleo hatramin’izay. Anisan’ny fangatahan’ireo mpankafy, na ireo mitovy taona amin’ny mpikambana na ireo zandry sy zanaka taty aoriana, ny hivelaran’ny lisitry ny hira hatao an-tsehatra bebe kokoa.